Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विद्युतीय बसको तीन अर्ब खोई ? – Emountain TV
विद्युतीय बसको तीन अर्ब खोई ?
काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस चलाउने घोषणा गरेको नौ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कुनै तयारी गरेको छैन । सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गुडाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको सरकारले अहिलेसम्म न बस किनेको छ न त चार्जिङ स्टेसनहरु नै बनाएको छ । ३०० वटा विद्युतीय बसका तीन अर्ब छुट्याइए पनि अहिलेसम्म बस किन किनिएन र चलाइएन ? आम सर्वसाधारणले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधारणका कारण उपत्यकामा वातावरण प्रदुषण बढी स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेपछि नेपालमा विद्युतीय बसको आवश्कता महसुुस गरिएको हो । त्यति मात्र होइन आयातित पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदै गएको र भारतबाट आयात गर्दा बेलाबेलामा समस्या देखिएपछि सरकार विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सरकारले बजेट भाषण मार्फत नै विद्युतीय बस सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाए पनि अर्काे बजेट भाषण आउने बेला हुन लाग्दासम्म विद्युतीय बसको कुनै छनक पाइदैन । धूला, धुलो, ध्वनी प्रदुषण बाट मुक्त हुनका लागि सर्वसाधारण भने उपत्यकामा विधुतीय बसको आवश्यकता भएर पनि नआएकोमा चिनिन्त छन् ।
सरकारले तीनसय वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयसँग सरकारले बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैंया साझा यातायातलाई दिएको छ । तर साझाले न बस नै किनेको छ न त बसको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन नै बनाएको छ ।
विजुली बस चल्न थालेपछि उपत्यकामा वायुप्रदुषण, ध्वनीप्रदुषण घट्ने र सार्वजनिक सवारीमा यात्रुलाई हुने सास्ती घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसकारण जतिसक्दा चाँडो विद्युतीय बस आउनु पर्ने वातावरणविदको सुझाव छ ।
विद्युतीय बसका संचालन गर्ने भनी सरकारले ५ वटा बस किनेर प्रधानमन्त्रीबाटै उद्घाटन पनि गरिएको थियो । किनेका ५ वटा विद्युतीय बस ११ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् । प्राविधिक परीक्षणमा गुणस्तरहीन भेटिएपछि सरकारले ती बस फिर्ता गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । केही महिना पहिला सरकारले लुम्विनीको लागि २ वटा विजुली बस चीनबाट ल्याएको बसको पनि अति कम गुणस्तरका भएकाले चल्न नसकेर यतिकै थन्किएर बसेका छन ।
सरकारले ल्याएकै बसमा यस्तो कमजोरी देखिएपछि बस खरिदमै भ्रष्टाचार भएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसमाथि छानबिन गरी कारबाही भएको भने सुनिएको छैन । मुलुकलाई वायु प्रदूषणमुक्त र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नेपालमा विद्युतीय बस संचालन आवश्यक छ ।